लकडाउनको उल्लंघनकाे परिणामः कैयन देशमा महामारी, हजारौंको मृत्यु, स्पेनमा हेलिकप्टर परिचालन | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more लकडाउनको उल्लंघनकाे परिणामः कैयन देशमा महामारी, हजारौंको मृत्यु, स्पेनमा हेलिकप्टर परिचालन
लकडाउनको उल्लंघनकाे परिणामः कैयन देशमा महामारी, हजारौंको मृत्यु, स्पेनमा हेलिकप्टर परिचालन	लकडाउन उलघंनको परिणाम –युरोपबाट हामीले के सिक्ने ?
काठमाडौं । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ । नेपालका सबैजसो बजार सुनसान रहेका छन् । बाटोमा समेत मानिसहरु निस्केका छैनन् ।
कतिपय स्थानमा स्वतःस्फूर्तरुपमा युवाहरुले लकडाउनलाई समर्थन गर्न अपील र प्रयास समेत गरेका छन् ।
तर सबै स्थानमा सोचेजस्तो भने देखिन्न । कतिपय स्थानमा मलाई केही हुँदैन या यो क्षेत्रमा भाइरस पस्दैन भन्ने मानसिकताका कारण मानिसहरु समूहमा भेला हुने गरेको भने देखिएको छ ।
तर लक डाउनको घोषणालाई सामान्यरुपमा लिँदा विश्वका कतिपय देशले भने ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ ।
तथ्यांक हेर्दा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको उल्लंघन गर्ने देशहरुको अवस्था सबैभन्दा बढी बिग्रिन पुगेको छ । यसबाट हजारौंले ज्यान गुमाउनु परेको देखिन्छ ।
विश्वमा लकडाउनको घोषणालाई उपेक्षा गर्दा कहाँ के के भयो त ?
भारतमा सरकारले चालेका प्रयासमा नागरिकले साथ नदिंदा संक्रमणले भयावह रुप लिने देखिन्छ । विदेशबाट फर्केका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिएपनि कतिपयले त्यसको उल्लंघन गर्दै घुमघाम गर्ने र घरबाटै काम गर्ने निर्देशन नमान्दै साथीभाईसँग जमघट गर्ने घटनाका कारण कतिपय व्यक्ति संक्रमित बनेका छन् ।
पछिल्लो समयमा सरकारले देशका ७५ भन्दा बढी शहर लकडाउन गरेपनि भारतीय नागरिकले सरकारको घोषणालाई मजाकका रुपमा लिएका छन् ।
सरकारको निर्देशन नमानेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले दुई पटक घरमा नै बस्न अपील गरेका छन् भने सुरक्षाकर्मीले कडाई गरेका छन् ।
जर्मनीमा संक्रमण फैलिएपछि पनि सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै युवाहरुले कैयौं स्थानमा कोरोना पार्टी गरिरहेका थिए । यसको नतिजा अहिले जर्मनीमा २८ हजार बढी संक्रमित भएका छन् भने १७ सय बढीको मृत्यु भएको छ ।
जर्मनीको दक्षिण प्रान्त बाबेरियाका सभापति मार्कसका अनुसार, अहिले पनि जर्मनीमा कोरोना पार्टीको आयोजना भइरहेको छ । युवाका समूहहरु कोरोना कोरोना भन्दै हल्ला गर्ने र बृद्धहरुलाई उपहास गरिरहेका छन् । यसपछि चान्सलर एन्जेला मर्केलले दुई भन्दा बढी व्यक्ति सँगै हिंडडुल गर्न नपाईने आदेश दिनुपरेको छ । उनी स्वयम् पनि आइसोलेसनमा छिन् ।
लकडाउनको नियम तोडनेहरुमाथि प्रहरीले जरिवाना लगाएको छ । समुन्द्र बीचमा कफूइू लगाइएको छ । लापरवाहीका कारण फ्रान्समा अहिलेसम्म १६ हजार बढी संक्रमित भएका छन् भने ६७४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपनि परिसमा समेत मानिसहरुको भीड पसलहरुमा देखिन्छ । अहिले प्रहरी परिचालनपछि अवस्था नियन्त्रणमा आएपनि यसअघि भने नियम तोडदा हिरो सोच्ने युवाहरुको प्रवत्तिका कारण कैयन पार्टीहरु आयोजना गरिए । यसबाट संक्रमण फैलिने वातावरण बन्यो । अहिले भने पेरिसको सीन नदीको किनारमा हिंडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । लकडाउनको अवधिक थप १५ दिनका लागि बढाइएको छ ।
अमेरिकामा सरकारको घोषणालाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ३३ हजार बढी संक्रमित बनेका छन् भने ४३० जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
नर्थ क्यारोलिन, फ्लोरिडालगायतका कैयन राज्यमा समुन्द्री किनारमा प्रतिबन्ध तोड्दै युवाहरुले पार्टी गरेका थिए । अहिले यी सबै बीचहरु बन्द गरिएका छन् । न्यूयोर्कका गर्भनर एन्ड्रयू क्युमोका अनुसार, उनको राज्यमा आधा भन्दा बढी कोरोना संक्रमण १९ देखि ४५ वर्षको उमेर समूहमा देखिएको छ ।
आइतबारदेखि भने न्यूयोर्कमा राती भेटघाट र जम्मा हुन रोक लगाइएको छ ।
इटालिको अवस्था पनि आम नागरिकले सतर्कता अपनाउन नसक्दा नै बिग्रेको हो । लकडाउनपछि मानिसहरुले पसलमा किनमेल गर्ने र रेष्टुरेन्टमा खाना खाने क्रम जारी नै राखेका थिए । यही लापरवाहीका कारण इटाली अहिले चीनपछि ठूो संक्रमण भएको देश र मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । इटालीमा ५९ हजार बढी संक्रमित भएका छन् भने साढे पाँच हजारको मृत्यु भएको छ ।
इटलीको मिलानमा लकडाउनपछि पनि मानिसहरुले सतर्कता नअपनाएपछि सेना परिचालन गरिएको छ । सरकारले १० मार्चका दिन लकडाउनको घोषणा गरेको थियो ।
स्पेन इटालीपछि संक्रमित हुने युरोपको देश हो । यहँ पनि सरकारको घोषणा नागरिकले मानेका छैनन ।
अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रहरीले हेलिकप्टर परिचालन गरी मानिसहरुलाई पक्रेर जरिवाना लिने काम गरेको छ । लकडाउन घोषणा नमान्दा इटालीमा २८ हजार बढी संक्रमित भएका छन् । १७ सय बढीको मृत्यु भएको छ ।
चैत ११ गते, २०७६ - १९:०४ मा प्रकाशित